Ngokuhamba kwesikhathi, cishe yilowo nalowo phakathi kwethu ebuza indlela ukubhala impendulo. Ungakwazi kalula babhekane nalesi msebenzi, uma ikhona, noma iyiphi izingcezu Imininingwane kumele siqukathe idokhumenti.
Block lokuqala (ngesikhathi izici ekuqaleni) kufanele ukwethula umqashi (noma esinye isisebenzi sikahulumeni) ngolwazi oluchaza. Igama eligcwele umsebenzi, usuku kanye nendawo lokuzalwa, imfundo. Uma izitifiketi eziningi, uhlu lwabo noma ngokulandelana kwezenzakalo, noma iboshelwe indawo yokuqala imfundo, okuvumela ukuba luthathe lesi sikhundla.
Eyesibili iyunithi kufanele wazise Officer, imithwalo yayo, ngesikhathi umsebenzi yilesi sigaba. Lapho ihlanganiswe ezinezici yomfundi practice, ecacisiwe emigomweni umsebenzi walo. Uma kuziwa izisebenzi zale nkampani, libala zonke izigaba yakhe umsebenzi.
Ngaphezu kwalokho kubonisa izinga ukuhambisana lochwepheshe ensimini. Kuyadingeka ukuba ukuhlola ukusebenza kanye nekhono we umsebenzi, ibhizinisi lakhe nabakwa- izimfanelo okhokhelwayo. Uma isici wenziwa endaweni wesisebenzi umsebenzi, ikakhulukazi emazingeni iyadingeka ukuba banake izimfanelo zakhe ibhizinisi: ikhono nethimba, ukuhlela umsebenzi nethimba lakhe kanye nekhono ukusebenza imibhalo, njll
Uma isici kunikezwa umfundi ngesisekelo ukukhiqizwa umkhuba, kufanele kuphawulwe ukuthi waziveza ngesikhathi umkhuba, yiliphi ibhizinisi kanye izimfanelo professional wabonisa.
Kanjani ukuze ubhale impendulo abasebenzi amakhono ahlukene? Njengoba kulindelekile, laba amadokhumenti, kuncike uhlelo efanayo, kuzohluka kokuqukethwe. Ngakho, uma abaholi kwasekuqaleni kudingeka ukubeka amakhono abo yenhlangano ke, isibonelo, kuchaza bantfu yemisebenzi nesandla esivulekile, kungcono uqale ucacise izimfanelo zabo yokudala: ithalente kanye nobuciko, ikhono ngokushesha beveza into entsha.
Engxenyeni elandelayo izici ezidingekayo ukuchaza ikhono ukuxhumana abasebenzi osebenza nabo nalabo abangaphansi, futhi abafundi - ngokunembile nezidingo othisha noma abaqondisi. Lapha ungakwazi uhlu izimfanelo siqu: ukusebenza kanzima, efaneleyo, kanye nobungane.
Ezinye izisebenzi zasemahhovisi ezingamaphesenti sebecabanga mayelana nendlela ukubhala impendulo. Baye ayilungiselele kusengaphambili isifanekiso ngawo ngokushesha futhi kalula akha idokhumenti. Isifanekiso ubala abasebenzi abaningi izinga. Drafter izici kungaba kuphela ongakhetha kuzo.
Abanye abaholi ongenalwazi, ukucabanga ukuthi iyiphi indlela ukuze ubhale impendulo, akhohlwe ukuthi kwenzeke kanjani ukuba kuyadingeka ukuze ubhalise.
Okokuqala, ngokuya nge-Athikili 14 TC, isici njengoba idokhumenti elinolwazi kuyakuyiswa ekhishwe kuphela uma kube nesicelo esibhalwe futhi njalo ngesandla. Lokhu kusebenza futhi ikakhulukazi ezimweni lapho impendulo ekhishwe ngesicelo komthetho.
Okwesibili, izici umphathi ngokushesha senziwa futhi esisayinwe esiphakeme futhi igunyazwe yi-round uphawu.
Ekugcineni, idokhumenti kumele sibhaliswe kahle futhi ube inombolo yereferensi.
Voronezh State Academy of Temahlatsi Engineering: amakhono kanye neminyango, amaphuzu Ukudlula
Nitration ka toluene: Reaction kwesibalo
Ural State Technical University (UPI Ural State Technical University) umlando. Ural Federal University yaqanjwa uMongameli wokuqala Russia B. N. Eltsina
Kostroma State Technological University: ikheli, izithombe, neminyango, amakhono
Tatar peremyachi: iresiphi
Isikhala somugqa e "uLizwi": indlela yokunciphisa noma ukwandisa yayo
Utshani kwabayishumi nanye: izakhi zokwelapha
Umqondisi-Japanese Hayao Miyazaki: Filmography futhi anime engcono